Thread လှံတံ, Flat အဝတ်လျှော်, Wedge ကျောက်ဆူး - Tianbang စွဲစေ
DIN571 Hex ဦး ခေါင်းသစ်သားဝက်အူ
ခေါင်းကိုစတုရန်းလည်ပင်းပတ်ပတ်လည် DIN603 ရထားမူလီ
DIN933 ပျော့ပျောင်းသောသံမဏိတန်း ၄.၈ Hex မူလီ
M6 Hex အနားကွပ်အခွံမာသီး DIN6923
သွပ်ရည်စိမ် 8. DIN934 Hex ခွံမာသီးကာဗွန်သံမဏိအနက်ရောင်
DIN127 နွေ ဦး အဝတ်လျှော်စက်ရုံထောက်ပံ့ရေး
DIN 125 ပြားချပ်ချပ်အဝတ်လျှော်ကာဗွန်သံမဏိသွပ်
4.8 galvanized DIN975 ချည်လှံတံကိုတန်း
ကွန်ကရစ်များအတွက်ချဲ့ထွင် Wedge ကျောက်ဆူးကျောက်မီးသွေး
ကာဗွန်သံမဏိသွပ်ချပ် knurled နှင့်အတူကျောက်ဆူးအတွက်တစ်စက်
Yongnian ကောင်တီ Tianbang စွဲစေကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Yongnian စွဲစွဲနေသောစက်မှုလုပ်ငန်းခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်။ ကျနော်တို့စွဲစေ၏ 10 နှစ်ကျော်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အားကောင်းသောနည်းပညာအင်အား၊ အဆင့်မြင့်တင်သွင်းထားသောစက်ကိရိယာများ၊ ပထမတန်းစားစမ်းသပ်ကိရိယာများ၊ သိပ္ပံနည်းကျအရည်အသွေးအာမခံချက်စနစ်၊ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ပြီးထိရောက်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။
DIN603 ရထားသော့ခ ...
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ကုန်ပစ္စည်းအမည် Carriage bolt အရွယ်အစား M6-M52, 1/4” -2” အဆင့် 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 ပစ္စည်းကာဗွန်သံမဏိ Q235 35k, 20MNTiB စံ DIN, ISO, GB, BS, ASTM Thread ကြမ်းချည်, Fine ချည်, တစ်ဝက်ချည်, အပြည့်အဝ Thread Surface Plain, အနက်ရောင်, သွပ်ထားသော, HDG, Dacromet ဝန်ဆောင်မှု OEM / ODM / စိတ်ကြိုက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုကုန်ကြမ်းစမ်းသပ်မှု, စမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်း, စမ်းသပ်မှု ISO9001 ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ, SGS နမူနာနမူနာရရှိနိုင်ပါသည်ထုပ်ပိုး 25kg အိတ် / ပုံး + pallet နျ Standard ။
DIN975 ချည်လှံတံ grad ...
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ပစ္စည်း Threaded rod အဓိကကုန်ပစ္စည်း DIN975 အရွယ် M5-M52 အရှည် ၁ မီတာ၊ ၂ မီတာ၊ ၃ မီတာ၊ ၆ မီတာသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောဖြတ် ၄၅၊ ၅၀၊ ၆၀ ပစ္စည်းကာဗွန်သံမဏိအဆင့် 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 အပူကုသခြင်း၊ မာကျောစေခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျစေခြင်းစသည်တို့ Standard Standard GB, DIN, ISO, ANSI / ASTM, BS, BSW, JIS စသည်တို့ကိုစံချိန်စံညွှန်းနှင့်မကိုက်ညီသော OEM ရရှိနိုင်ကြောင်း Finish Plain, Black, Zincated, HDG, Dacromet Certification ISO9001, SGS Package Bundles အရသိရသည်။ အတူတကွ ...
သွပ်ရည်စိမ် 8. DIN934 H ကို ...
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ပစ္စည်း Hex nut အဓိကထုတ်ကုန်များ DIN934, DIN439, ISO4032 အရွယ် M5-M64 တိုင်းတာမှုမက်ထရစ်၊ Imperial (လက်မ) ပစ္စည်းကာဗွန်သံမဏိ: Q195, 1035, 1045,10b21 အဆင့် ၄၊ ၆၊ ၈၊ ၁၀၊ ၁၂ အပူကုသမှု၊ အပူ၊ ပုံကြမ်းနှင့်နမူနာများအရမာကြောကာဗွန်သံမဏိ: HRC: 25-60, HV450-700 Standard GB, DIN, ISO, ANSI / ASTM, BS, BSW, JIS စသည်တို့ကိုမရရှိနိုင်ပါ။ အနက်ရောင်၊ သွပ်၊ HDG၊ Dacromet Manu ...
DIN933 ပျော့ပျောင်းသောသံမဏိ ...
သတ်မှတ်ချက်ပစ္စည်း Hex bolt အဓိကပစ္စည်း DIN931 DIN933 အရွယ် M5-M64 အရှည် 10-600mm မျက်နှာပြင်လွင်ပြင် / အနက် / သွပ်ချထား / HDG / Dacromet စံ DIN GB ISO ISO / ASME BS ပုံမှန်မဟုတ်သောအဆင့် 4.8 ၈.၈ ၁၀.၉ ၁၂.၉ ကုန်ကြမ်း Q235, Q195,1035, 1045,20MnTiB, 35Crmo လက်မှတ် ISO9001, SGS အထုပ် 5kg, 10kg, 25kg ကာဗွန် / အိတ် + pallet သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်။ တင်ပို့နေသည် Tianjin ဆိပ်ကမ်း၊ Qingdao ဆိပ်ကမ်း၊ အခြားအသုံးချမော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းများ၊ စက်မှု၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အမှုန့်၊ မီးရထား၊
DIN 125 Flat အဝတ်လျှော်ခြင်း ...
သတ်မှတ်ချက်ပစ္စည်း Flat အဝတ်လျှော်; Plain အဝတ်လျှော်အဓိကထုတ်ကုန်များ DIN125 DIN9021 အရွယ်အစား M4-M64 အဓိကစကားလုံးအဝတ်လျှော်ပြားများပတ် ၀ န်းကျင်ပစ္စည်းကာဗွန်သံမဏိ: Q195, Q235, 1035, 1045, 65Mn အဆင့် 4.8,8.8,10.9,12.9 Standard GB, DIN, ISO, ANSI / ASTM, BS, BSW ပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်နမူနာများအရ Finish Plain၊ Zinc Plated (Clear / Blue / Yellow / Black)၊ အနက်ရောင်၊ HDG၊ Dacromet အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ISO9001, SGS Package 5kg 10kg 25kg အိတ် / ပုံး + ထုပ်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်, JIS စသည်တို့ကိုစံသတ်မှတ်ချက်မရှိသော OEM ကိုရရှိနိုင်သည်။ ။ လျှောက်လွှာ ...
တတိယမြောက်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများကိုစတင်ခဲ့သည်။ ပြည်နယ်ရှစ်အလုပ်လုပ်!
ရင်းမြစ် - ဂေဟဗေဒနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင် ၀ န်ကြီးဌာန၊ တရုတ်ရေစိုခံအစီရင်ခံစာ၊ ရွှေပင့်ကူဝက်ဘ် 2021-04-08 ဂေဟဗေဒနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးစစ်ဆေးသူများ၏လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဗဟိုစည်းမျဉ်းများအရ၊ ဗဟိုဂေဟစနစ်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာတတိယအစုအစည်း၏ဒုတိယအကြိမ် ..
Hebei Fastener Industry Association အသင်း၏ကွန်ဖရင့်ကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်
ရင်းမြစ်: Yongnian ခရိုင်စံအစိတ်အပိုင်းများစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ 2021-04-01 မတ်လ 31 ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်, hebei စွဲစေစက်မှုလုပ်ငန်းအသင်း၏ပထမ ဦး ဆုံးပဉ္စမအထွေထွေအစည်းအဝေးတရုတ် yongnian စွဲစေကုန်စည်ပြကုန်စည်ပြပွဲ၏ညီလာခံခန်းမ၌အောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့သည်။ Chang-ming wang ...
မြောက်ဘက် Dongtantou, Yongnian, Hebei, တရုတ်
သော့ခတ်နားချင်းဆက်မှီ Nut, Hex Socket Bolt ကို, Wing Nut နား, Hollow Metal Frame Compression ကျောက်ဆူး, ဖောင်ဒေးရှင်းကကျောက်ချစခန်း, Hex Socket Head Bolt သည်,